सेतोपत्र डेस्क सोमबार, भदौ ७, २०७८
काठमाण्डौ, भदौ ७ । जापान सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको एस्ट्राजेनिका खोप नेपाल आइपुगेको छ । जापान सरकारले कोभ्याक्स सुविधामार्फत अनुदानमा उपलब्ध गराएको पाँच लाख ५९ हजार डोज खोप आज काठमाडौं आइपुगेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार आज आएको खोप सँगै जापानबाट अनुदानमा उपलब्ध गराउने भनिएको १६ लाख १४ हजार ७४० मात्रा खोप आइसकेको छ ।
यसअघि साउन २३ र २४ गते ९ लाख मात्रा र यही भदौ ५ गते दुई लाख आठ हजार ७ सय मात्रा खोप नेपाल आएको थियो । जापानबाट उपलब्ध भएको खोप प्रदेश १ र २ का ज्येष्ठ नागरिक, शिक्षक, पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई लगाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । गत फागुनमा कोभिशिल्ड लगाएका ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक सहित अन्यलाई मन्त्रालयले एस्ट्राजेनिका खोप लगाइरहेको छ ।
भारतबाट खरिद गरिएको कोभिशिल्ड खोप नआएपछि सरकारले जापानबाट अनुदानमा एस्ट्राजेनिका खोप ल्याएको हो । यसैगरी चीनबाट अनुदानमा थप १६ लाख डोज भेरोसेल खोप समेत चाँडै आउने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेलले बताउनुभयो । नियमित आउने खोप ५० वर्ष मुनिका र प्राथमिकतामा परेकालाई लगाइने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालमा अहिलेसम्म करीब एक करोड ४० लाख मात्रा खोप आइसकेको छ । अहिलेसम्म ४९ लाख ४२ लाख २५० जनाले पहिलो मात्रा र ३८ लाख ४६ हजार ७३६ जनाले पूर्ण मात्रामा खोप लगाइसकेका छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ७, २०७८, १८:४४:००